नारायण अधिकारी सोमबार, भदौ २२, २०७७, १४:५२
काठमाडौं-टोखा नगरपालिका १० स्वर्गद्वारी गोंगबुमा भएको क्रुर हत्याको अभियोगमा ३७ वर्षीया कल्पना मुडभरी पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएकी छिन्।
प्रहरीसँगको बयानमा उनले हत्या आफूले गरेको स्वीकार गरेकी छिन्। बोहराको क्रुर हत्या गर्ने योजनासम्म कल्पना किन पुगिन्? कसरी हत्या गरिन् र शव व्यवस्थापन गरिन् भन्नेसम्मका रहस्य प्रहरीको बयानमा खुलाएकी छिन्।
यस्ताे छ कल्पनाको बयान :
मैले सामाजिक सञ्जालमा कल्पना पौडेलको फेसबुक आइडी चलाउँथे। सोही क्रममा चार/पाँच वर्ष अघिदेखि कृष्णबहादुर बोहोरासँग चिनजान भएको थियो। म्यासेन्जरमा कुराकानी गर्ने क्रममा हामीबीच परिचय भयो। सुरुमा बोहोराले आफू साउदी भन्ने मुलुकमा रहेको बताएका थिए।
कुरा गर्ने क्रममा निजले 'तिमी बिहे गर्दिनौं? मेरो पनि कोही छैन मसँग बिहे गर्ने हो?' भन्ने गरेका थिए। मैले ‘सरी ल’ र ‘डिठ्ठा साप’ टेलिसिरियलमा अभिनय गरेपश्चात निजले उक्त भिडियो हेरेपछि मेरै सुटिङको फोटो राखी कल्पना शाही भन्ने फेक फेसबुक आइडी बनाई मेरा फोटाहरु अपलोड गर्न थाले।
बोहोराले मेरो केटी साथीहरुलाई समेत फ्रेण्ड बनाई मेसेज गर्ने गरेका रहेछन्। यो कुरा मैल थाहा पाएर किन यसो गरेको भन्दा मेरो मर्जी हो, आफूखुसी गर्छु भन्दै आएका थिए। करिब ६/७ महिना अगाडि उनले मलाई विभिन्न होटलमा बोलाई पटक–पटक होटलमा भेटघाट गर्ने गरेका थियौं।
मैले किचन कोठामा राखेको ह्याम्मर हातमा लिई उनी सुतेको एटेच कोठामा आई कपडा बाहिरबाट बोहोराको अण्डकोष, लिङ्गमा ४/५ पटक प्रहार गरें। त्यसपछि उनी चल्न चल्मलाउन छाडे।
३/४ मिनेटपछि मैले प्रयोग गर्ने मेरो बेडमा भएको कालो रंगको सलले उनको घाँटीमा बेसरी कसी अठ्याएँ। अब यो मर्‍यो खत्तम भयो भन्ने विश्वास भएपछि मैले उनको दुबै हातको कुममा समाई घिसार्दै सँगै कोठामा रहेको एटेच ट्वाइलेट बाथरुममा तानी आधा जति शरीर बाथरुमभित्र छिराएँ।
शरीरको आधा भाग कोठामै रहेको गलैंचा माथी मेट्रेसमा राखी म किचनमा गई मासु काट्ने फलामको धारिलो हतियार दाउ लिएर आई उनकाे घाँटी रेटी टाउको शरीरबाट छुट्याएँ।
८२ लाख ५० हजार रुपैयाँसहित ४ जना हुण्डी कारोबारी पक्राउ ८२ लाख ५० हजार रुपैयाँ सहित पर्साबाट ४ जना हुन्डी कारोबारी पक्राउ परेका छन्। अवैध वित्तीय कारोबार (हुण्डी) गरिरहेको भन्ने सूचना प्रा... बुधबार, वैशाख २९, २०७८